Ambongadiny HHC-0 Distillate | 2022 Vidiny tsara indrindra
Faly izahay manondrana Hexahydrocannabinol-Acetate Distillate, fantatra amin'ny HHC 0 Distillate sy HHC-O Acetate Distillate, ary THC-O Acetate Distillate (fantatra koa amin'ny hoe THC-0) Japana avy any Etazonia.
Ny hazakazaka ho an'ny fampidirana cannabis maneran-tany ara-dalàna sy ny fanekena ara-kolontsaina dia mitarika!
Japoney vao haingana no nanokatra ny sandriny tamin'ny vokatra azo avy amin'ny hemp. Nisy toromarika hentitra anefa narahina. Vokatr'izany dia notadiavin'ny Japoney izahay ho an'ny Hexahydrocannabinol O-acetate (fantatra koa amin'ny hoe HHCo sy THC-O) -acetate, fantatra amin'ny anarana THCo.
Sambatra tsy takatry ny saina izahay fa vao haingana no niara-niasa tamin'ny iray amin'ireo vondrona vitsy eran'izao tontolo izao izay nahavita ny taratasiny rehetra ary voamarina niaraka tamin'ny Governemantan'i Japana ho Mpanondrana / mpanafatra Hexahydrocannabinol Acetate. Antsoina koa hoe HHC -O-acetate sy HHCo ary THC -O-acetate fantatra koa amin'ny hoe THCo any Japana.
Inona avy ireo fepetra takiana handefasana Hexahydrocannabinol-Acetate Distillate, antsoina koa hoe HHCo Distillate sy HHC-O Distillate, ary THC-O-acetate Distillate mankany Japon?
Misy fitsipika sasany. Ireo fitsipika ireo dia manan-danja kokoa, fa tsy hoe:
Manafatra ambongadiny HHC-O distillate ary HHCo ho any Japana, tsy maintsy efa neken'ny governemanta tamin'ny fomba ofisialy ianao.
Ny vokatra dia tsy tokony hisy THC. Noho ny raikipohy manokana Japoney ampiasainay dia mahafeno io tokonam-baravarana io ny fitaovanay.
Tsy maintsy afaka manaporofo andiany isaky ny andiany ianao fa ny HHC, HHCo, na THC-O acetate dia avy amin'ny tahon-kazo, voa, fa tsy voninkazo.
Amin'izao fotoana izao dia mandray commande hatramin'ny 1 kilao (1 litatra) izahay. Tsy mandray commande latsaky ny 1 kilao (1 Liter) izahay.
Ohatrinona ny orinasa HHC-0 Distillate ambongadiny nataon'ny Redemperorcbd.com tany Japon?
Mbola vaovao ihany ity tsena ity hatramin'ny namoahana ity bilaogy ity. Mino aho fa rariny raha anisan’ny mpisava lalana eo amin’ny tsena izahay. Na izany aza, efa an-taonany maro izao no nandefasanay Cannabinoids ara-dalàna iraisam-pirenena ary tsy miraharaha ny volan'ny mpanjifanay.
Mbola mianatra i Japana ary miezaka mafy izahay mba hanara-maso ny toetr'andro, miovaova ary mifanaraka amin'ny lalàna miovaova ao Japana.
Hitanay fa afaka manao fandefasana kely kokoa izahay, fa baiko lehibe kokoa, mandritra ny asa ataonay. Na dia teo am-piandohan'ny fizotry ny fandoavana ny fadin-tseranana aza izahay dia nofafana tamin'ny alàlan'ny laboratoara mpiara-miombon'antoka ary afaka manolotra ny vokatray amin'ny mpanjifa amin'ny fotoana fivoahana kely kokoa izahay. Tokony ho tonga ao anatin'ny 30-60 andro eo ho eo ny vokatrao.
Tsy afaka mifehy ny fotoana fivoahana izahay, fa afaka manome toky anao izahay fa hanao asa matihanina sy ara-dalàna izahay mba hanalefahana ny olana mety hitranga.
Tsy mandray commande ho an'ny HHC ara-dalàna intsony izahay fa handray commande ho an'ny THCo betsaka ary Ny lanjany ambony indrindra an'ny HHCo miaraka amin'ny 0% THC.
Te hahafantatra bebe kokoa momba ny Experience International Import/Export miaraka amin'ny Cannabis Legal ve ianao? Ny Torolàlanay momba ny Cannabis Iraisam-pirenena dia azo alaina amin'ny famoahana ity bilaogy ity.
Saro-pady amin'ny fahasamihafan'ny fotoana izahay, saingy manana mpiasa afaka 24 ora isan'andro izahay hanampy ireo namana Japoney. Aza misalasala mifandray aminay amin'ny fotoana rehetra!
Tompon'andraikitra amin'ny vokany rehetra ianao.
Raha te handray ny fonosanao dia mila mandoa sara 10% amin'ny fadintseranana ianao ary azo inoana fa tsy maintsy maka izany any amin'ny Customs.
Mivarotra terpenes ihany koa izahay - samy terpenes novolavolaina ary koa terpenes mivantana.
Izahay ihany no manaiky ny fanamarinana, ny fandefasana tariby, ny baikon'ny vola, na ny vola nomerika (raha toa ianao ka tompon'andraikitra amin'ny fisondrotry ny vidim-piainana / ny sandan'ny vola nomerika).
Alohan'ny handaminana ny antontan-taratasy dia miandry ny vola mivoaka amin'ny kaontin'ny banky.
Ny ladoany dia hanolotra taratasy ho anao. Rehefa tonga izany dia hifandray aminao amin'ny alàlan'ny mailaka na telefaona izy ireo.
Indray mandeha isan-kerinandro, mandefa sy manodina ny baiko THCo/HHCo izahay. Mandefa commande izahay ny alatsinainy satria sarotra ny dingana.
Mba hikarakarana ny antontan-taratasy, ny alarobia alohan'ny daty fanapahana ny baiko amin'ny herinandro ho avy no tapaka.
Tsy ekena ny baikon'ny carte de crédit.
Amin'izao fotoana izao, ny fandefasana dia maharitra roa herinandro eo ho eo.
Safidy hafa amin'ny Hexahydrocannabinol Acetate. Antsoina koa hoe HHCO-acetate sy HHC-0 ary THCO-acetate. Antsoina koa hoe THC-a0 Japana:
Isoka ny CBD
Gummies mifanaraka amin'ny Delta 9
Ambongadiny HHC-O Distillate - Hexahydrocannabinol - Acetate
HHC-O (hexahydrocannabinol-acetate) dia iray amin'ireo cannabinoids vaovao indrindra hiditra amin'ny indostrian'ny cannabis. Izy io dia cannabinoid izay nalaina avy amin'ny mitokana CBD. CBN, CBC ary CBG dia cannabinoid hafa azo avy amin'ny hemp izay miha-malaza.
Ny fiantraikan'ny HHC-O dia mety mitovy amin'ny delta 9 THC. Izany no mahatonga ny HHC-O ho cannabinoid mahery kokoa noho ny delta 8 THC. Ny HHC dia azo alaina mora amin'ny fatra betsaka mba hanomezana ny filan'ny tsena.
Fampahafantarana momba ny vokatra ambongadinay HHC-O Distillate
Ahitana 98% + Total cannabinoids mavitrika (TAC).
100% avy amin'ny hemp
Misy latsaky ny 0.3% Delta-9-THC
Ny vokatra HHC-O rehetra dia avy amin'ny HHC avy amin'ny hemp. Ara-dalàna izy ireo eo ambanin'ny lalàna federaly sy fanjakana. Ianao no tompon'andraikitra amin'ny famaritana raha ara-dalàna ao amin'ny faritra na faritany misy anao io vokatra io alohan'ny hividianana HHC an-tserasera.
Inona no atao hoe Hexahydrocannabinol-acetate?
Ny indostrian'ny cannabis dia nifindra mihoatra ny vokatra CBD sy THC mba hanolotra cannabinoids hafa. Betsaka ny vokatra misy delta 8 THC, CBC ary CBN ary koa THC-O. Ankehitriny, ny HHC-O (hexahydrocannabinol-acetate) dia mipoitra.
HHC-O, cannabinoid mahery hita amin'ny zavamaniry cannabis, dia fantatra amin'ny anarana hoe "cannabinoid mahery". Tena mitovy amin'ny THC izany. Ny mampiavaka ny hexahydrocannabinol-acetate dia ny hydrogenation sy acetylation. Delta 8 THC fotsiny izy io. Ny vokatra dia acetylated mba hahatonga ny HHC-O. Ny fanehoan-kevitra simika eo amin'ny hydrogen sy THC dia manova ny lanjan'ny molekiola sy ny rafitra geometrika. Izany dia miteraka fitambarana marin-toerana izay mahatohitra kokoa ny hafanana ary maharitra ela kokoa.
Ireo singa mifandraika amin'ny HHC0-O
THC sy HHC-O dia manana firafitry ny molekiola saika mitovy, izay mety hampisafotofoto ny mpanara-maso tsy voaofana. Misy fahasamihafana lehibe izay mahatonga ny HHC O ho marin-toerana kokoa. Ireo fahasamihafana ireo dia afaka manova ny fiantraikan'ny psychoactive HHC. Ny HHC-O dia psychoactive kokoa noho ny HHC ary mety ho psychoactive kokoa noho ny delta-9 THC.
Ny avo dia mitovy amin'ny cannabinoids psychoactive hafa, izay miteraka fahatsapana hafaliana toy ny rehefa mandray azy ireo ianao. Ny fomba fanjifana dia hamaritra ny faharetan'ny vokatra. Ny HHC-O dia mety ho kely kokoa noho ny delta 9, saingy mbola matanjaka kokoa noho ny delta 8. HHC-O dia azo ampiasaina hahazoana avo ara-dalàna matanjaka kokoa noho ny delta 9.
Mbola tsy afaka manao fanambarana voafaritra tsara momba ny tombontsoa ara-pahasalamana ny HHC izahay. Mila miandry isika mandra-pikarohana bebe kokoa momba ny fananana fanafody sy cannabinoids HHC. Ny ankamaroan'ny fanambarana momba ny tombontsoa ara-pahasalaman'ny HHC-O dia mifototra amin'ny traikefa manokana ihany.
Ahoana ny famokarana HHC-O?
Misy tsena lehibe ho an'ny cannabinoids hafa avy amin'ny hemp. Mba hamokarana HHC be dia be dia mila zavamaniry hemp be dia be ianao. Ilaina ny hydrogène na isomerize hemp mba hahazoana cannabinoids misy dikany.
Ny isomerization sy ny fitrandrahana CBD azo avy amin'ny hemp dia ilaina mba hamokarana delta 8 THC na delta 10 THC be dia be ho an'ny tanjona ara-barotra. Ny dingana mitovy dia azo ampiasaina hamokarana HHC be dia be amin'ny fampiasana CBD. Ny dingana dia hafa kely satria mampiasa dingan'ny hydrogenation fa tsy isomerization. Ny HHC dia tsy azo alaina ho azy amin'ny habetsahana ampy mba hahazoana vola be, noho izany dia tsy maintsy ovaina avy amin'ny CBD. Ny HHC dia azo acetylated mba hahatonga HHC-O.
Ahoana ny maha-ara-dalàna ny Hexahydrocannabinol-acetate?
Ny volavolan-dalàna momba ny fambolena 2018 dia manara-dalàna ny hemp sy ny vokatra azony rehetra. Ny zavamaniry hemp ara-dalàna (Cannabis Sativa), dia misy latsaky ny 0.3% THC, ilay fitambarana psychotropic hita ao anaty cannabis. Cannabis Sativa dia heverina ho marijuana raha mihoatra ny 0.3%.
Ny nalaina HHC ampiasainay dia hemp ara-dalàna federaly 100%. Ny fitrandrahana hemp dia tsy mihoatra ny 0.3% delta-9 THC mandritra ny fizotran'ny famokarana. HHC, toa ny delta 8 sy 10, dia ara-dalàna amin'ny ambaratonga federaly raha alaina amin'ny hemp.
Ahoana ny fampiasana HHC-O
Afaka mihinana HHC mitovy amin'ny CBD sy delta 8 THC ianao. Ny fomba fanjifanao ny HHC no hamaritra ny fotoana manomboka miasa.
Ny vokatra dia azo ampiasaina hamenoana ny cartridges vape HHCO. Tena mety amin'ny famoronana cartridges vape haingana sy mora noho ny viscosity ambany. Mipoitra avy hatrany ny vokatry ny vape. Mifoka haingana ny etona ary miditra ao amin'ny havokavokao. Avy eo dia mandeha mivantana any amin'ny lalan-drànao izany. Hanomboka hiseho ao anatin'ny minitra vitsy ny avo. Amin'ny ankapobeny dia maharitra adiny roa ka hatramin'ny telo ny vokany.
Ny HHC-O dia azo ampidirina amin'ny sakafo ihany koa. Ny HHC-O dia azo ampiasaina hanamboarana cookies, gummies, mofomamy, tsindrin-tsakafo, na sakafo hafa. Ny HHC-O dia saika mitovy amin'ny delta 9 THC amin'ny lafiny fiantraikany sy hery. Ny mpampiasa sasany dia milaza fa ny HHC-O dia matanjaka kokoa noho ny delta-9 THC. Ny haavon'ny fandeferanao amin'ny THC dia tokony ho fototry ny fatranao.
Mba hanaovana tinctures, ny HHC dia azo atambatra amin'ny menaka MCT na menaka voanio hemp. Ny tinctures dia azo ampiasaina amin'ny fitantanana ny fihinanana HHC-infused na sublingually. Ho tsapanao ny vokany ao anatin'ny minitra vitsy raha apetraka eo ambanin'ny lelanao ny tincture. Raiso mandritra ny adiny 1 hatramin'ny 2 farafahakeliny ny endriky ny fanafody azo hanina alohan'ny hahatsapanao ny vokany.
Ny vokatra hexahydrocannabinol-acetate dia tsy voavahan'ny FDA.
Ny HHC-O dia tsy tokony ampiasaina hamantarana, hitsaboana na hanasitranana aretina.
Alohan'ny hampiasana ny vokatray dia miresaha amin'ny dokotera.
Raha mihinana fanafody prescription ianao dia miresaha amin'ny dokoteranao.
Raha bevohoka ianao, na mampinono, dia aza mampiasa ny vokatray.
Alohan'ny hampiasana ity vokatra ity dia miresaha amin'ny dokotera.
Fitsapana zava-mahadomelina sy HHC-O
Tsy misy angona ampy momba ny fiantraikan'ny hexahydrocannabinol-acetate (HHC-O) amin'ny fitsapana zava-mahadomelina. Ny metabolites HHC-O dia mety miteraka vokatra diso amin'ny fitsapana ny metabolites THC. Raha tsy maintsy mandalo fitiliana zava-mahadomelina ianao dia aza mampiasa ity vokatra ity.
Vidio ny vokatra HHC-0 amin'ny Internet Redemperorcbd.com